Gajal | Love Joshi
Category Archives: Gajal
अामाको सन्दुक ( पूर्ण संपादित )
(१०४) त्यसबेला शिक्षक र विद्यार्थीको दूरी लामो थियो ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १०४ )
२०७२ असार २१ गते सोमवार
त्यसबेला शिक्षक र विद्यार्थीको दूरी लामो थियो ।
विक्रम शम्बत २०२७ मा म पहिलो पटक शिक्षक पदमा नियुक्ति भएं । विद्यालय थियो बुटवलको नि:शल्क अनिवार्य प्राथमिक पाठशाला संख्या नं. १ ( हालको कालिका माध्यमिक विद्यालय ) । तत्कालिन बुटवल -खस्यौली नगर पंचायतले ५ वटा नि:शुल्क प्राथमिक विद्यालयहरु संचालन गरेको थियो । यो कार्यक्रम नेपाल अधिकाज्यमा नै पहिलो नमूना थियो । मैले ३ ,४ र ५ कक्षालाई अंग्रेजी र विज्ञान पढाउने ज़िम्मेवारी पाएँ । पहिलो दिन पहिलो कक्षा ४ लाई पढ़ाएँ ।छात्राको संख्या कम र छात्राको संख्या धेरै । ४० – ४५ मिनट समय वितेको पत्तो नै भएन । पहिलो दिनमै विद्यार्थीहरुसंग घुलमिल भएँ । तर त्यसबेला शिक्षक र विद्यार्थीको दूरी लामो थियो । शिक्षक भनेपछि विद्यारथीहरु डराउँथे,टाढै बस्थे । शिक्षकले प्रश्न गर्दा उनीहरु जवाफ दिन पनि हिचकिचाउँथे । मौन रहन्थ्यो, कक्षाको वातावरण ।
(८२) गर्मीको मौसममा विद्यार्थीलाई सजाय दिनु हुंदैन ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ८२ )
२०७२ जेष्ठ २५ गते सोमवार
गर्मीको मौसममा विद्यार्थीलाई सजाय दिनु हुंदैन ।
२०७२ जेष्ठको अन्तिम साता गर्मी ह्वास्सै वढेर आएको छ । पठनपाठन दुरुह भएकोछ । काम तदारुकतासाथ गर्नै अप्ठेरो भएकोछ । कुनै न कुनै कक्षामा विद्यार्थी ढीलो आएका हुन्छन् । शिक्षकहरुले त्यस्ता विद्यार्थीलाई “उठबस” गर्ने सजाय दिन्छन् । कसैलाई घाममा बसी राख भनी आदेश दिन्छन् । यस्तो दुबै काम अनुत्तरदायीमा पर्दछ । यसो गर्दा बढी गर्मी भएको बेलामा विद्यार्थी बेहोश भएर लड्न सक्छन् । अत: शारीरिक सजाय दिइनु उपयुक्त छैन ।
(८१) प्रचण्ड गर्मी
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( ८१ )
२०७२ जेष्ठ २४ गते आइतवार
तराईमा ४३.३ डिग्री सेल्सियस र उपत्यकामा ३६ डिग्री हाराहारी तापक्रम रेकर्ड हुनु प्रचण्ड गर्मीको नमूना हो । आफ्ना दैनिकीकोनिमित्त मानिस जाँदैनन् बाहिर । बजारमा हुंदैन कुनै चहलपल । तराईमा “लू” ( तातो हावा ) चल्छ । डिहाइड्रेसन ( शरीरको पानी सुक्नु ) हुन सक्छ । उदाहरणकोलागि अण्डा भित्र ल्याल्ल परेको तरल पदार्थ हुन्छ । त्यसलाई उमाल्दा अण्डा जमेर कडा हुन्छ । ठोस बन्छ । हामी फोकेर खान सक्छौं । तापले पानी सुकाउँदा अण्डाको यस्तो गति हुन्छ । यसरी नै धेरै गर्मी भयो भने हाम्रो शरीरको पानी सुकेर रक्त संचार बन्द हुन्छ । अनि मृत्यु हुन्छ । लूबाट बच्न प्रशस्त पानी, जुस, रस,फलफुल सेवन गर्नु पर्दछ । बाहिर घाममा जानु हुंदैन । पातलो कपडा टाउकोमा बेर्नु पर्दछ । छाताको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
पिएर मात्रै लाग्दैन नशा,
तिमीलाई हेरेरै लाग्दछ ।
छर्छ वासना फूलले फुलेरै मात्रै,
छर्रछ्यौ वासना तिमी त हाँसेर मात्रै ।
हुंदैन घायल मात्र वाणले,
नजरकै वाण लाग्नु पर्दछ ।
वग्दैन हावा त्यसै स-ल-ल,
तिम्रै केश फिंजिनु पर्दछ ।
-२०६८ / १ / ११ / १
मुसुक्क हाँसी छिनमै रिसाउने मुहार ,
सम्झना छ,गहिरो सम्झना छ मलाई ।
मन त रमाउँथ्यो, सुखद हुन्थ्यो ,
अर्थ के थियो ? थाहै भएन मलाई ।
तिनाउमा साँझ पौडेको बेला ,
हाँस्दै,गिज्याउँदै ढुंगा हान्ने त्यो मुहार ।
मीठो लाग्थ्यो, मायालु लाग्थ्यो,
धेरै-धेरैसंम, त्यो चोखो उपहार ।
म त गऐं टाढा, बसाइ सरी,
कुहिराको कागझैं, हराएको हेला ।
भीडमा,मन्दिरमा अनि हाटमा देखेकै बेला,
बोलाउँथी चिच्चाइ-चिच्चाइ “ऐ,लव” भनी ।
टक्क अडिन्थेँ, बिस्मित हुन्थें, खुसी हुन्थें,
हराएकी “जुन”, भेटिई भनी ।
सुनें समाचार मानसिक रोगले ग्रस्त भई,
भेट्ने समय नजुर्दैमा,सुने ऊनी अलविदा भई ।
केही लिनु न दिनु, अतित पनि भुल भो,
राख्तै न राखेको प्रेम प्रस्ताव पनि शूल भो ।
( रचना काल : २०७० बैशाख २३ )
कोही भए ‘वीरगति’, विगुल बजाई सलाम ।
कोही भए ‘आफै शहिद’, ओढ़ाई झण्डा सलाम ।
खोई कसलाई के भन्ने ?, जसको छैन विराम ।
अब कहिले जानु पर्ने हो ?, आफू आफ्नै मलाम ।
छैन कुनै चोखा प्रकृतिका, झरना नदी नाला ।
तराई, पहाड, हिमाल बगे, रगतका खोला ।
‘ठूले’ पनि हार्दैन त्यसै, ‘कान्छो’ पनि जित्दैन ।
दिन दिनै देशै बरू हार्छ,कोही घिन मान्दैन ।
वन पाखा भन्ज्यांग कतै, नीरव शान्ति पाइन्न ।
टाउका बरु भेटिन्छन् नि, ढुंगा कतै पाइन्न ।
कहिले होला बग्ने मायाको, त्यो हावा सरसर ।
डर छैन केही मिल्छन् भाइ,अब जोशी सर ।
(रचना काल: २०६१/५/१ र २०६१/५/५/७को नेपाल समाचार पत्रको “सौग़ात”मा प्रकाशित ।)